by ဂျနီဖာ Cooper က
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ် - ဘာသာစကားများကိုခြေလှမ်းများ၏ခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှဘာသာစကားများကိုခြေလှမ်းများ၏ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Eliza Kinnealy
ထို့အပြင် '' Cuse သို့မဟုတ် SU အဖြစ်လူသိများဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်, ဆိုင်းရာကူစ်း, New York မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂလိက coeducational သုတေသနတက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ 1870 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဆိုင်းရာကူစ်းလက်ရှိအကြမ်းဖျင်း 14,000 တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများနှင့်အတူစာရင်းသွင်းအကြောင်းကို 21,000 ကျောင်းသားများ, ရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ကျောင်းမှအရောင်လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်၎င်း၏ mascot အော့တိုဟာလိမ္မော်ရောင်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
ဗိသုကာပညာ၏ကျောင်း, ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံကောလိပ်ပညာရေးကျောင်း, အားကစားနှင့်လူ့ Dynamics ကိုဒါဝိဒ်ခ Falk ကောလိပ်ပြန်ကြားရေးလေ့လာရေးကျောင်း (iSchool), ဥပဒေကောလိပ်, Maxwell School တွင်: အဆိုပါတက္ကသိုလ်ဆယ်ပညာရေးဆိုင်ရာကျောင်းများ / ကောလိပ်များသို့ကွဲကွာနေသည် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ, SI ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး Newhouse ကျောင်း, အင်ဂျင်နီယာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏ LC စမစ်ကောလိပ်, တက္ကသိုလ်ကောလိပ်, Visual နှင့်ဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာကောလိပ်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏မာတင်ဂျေ Whitman ကျောင်း, နှင့်ဘွဲ့လွန်ကျောင်း။
ဆိုင်းရာကူစ်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Big အရှေ့ညီလာခံ အားလုံး NCAA ရတိုင်းကျွန်မအားကစားသမားများအတွက်နှင့်ပူးပေါင်းလိမ့်မယ် အတ္တလန္တိတ်ကမ်းခြေညီလာခံ ဇူလိုင်လ 1, 2013 တွင်။
တချို့ကကျော်ကြားဆိုင်းရာကူစ်းကျောင်းသားဟောင်းများ Dick Clark က, ဂျိုးဘိုင်ဒန်, ဂျင်မ်ဘရောင်း, Vanessa Williams က, Ernie Davis ကများနှင့် Betsey Johnson ကပါဝင်သည်။
နှင်းဖုံးကျောင်းပရဝုဏ် - ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ quad နှင်း (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: လီလီ Ramirez
အလယ်ပိုင်းက New York မှာယင်း၏တည်နေရာနှင့်အတူ, ဆိုင်းရာကူစ်းနှင်း၏ 100 ခန့်လက်မနှစ်စဉ်တွေ့ကြုံရသည်။ အတော်များများကကျောင်းသားများကိုကြောင့်လာမယ့်နေ့ကနှင်းဖုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူနေသာဖြစ်နိုင်သည်တနေ့အဖြစ် "စိတ်ကြွ" ရာသီဥတုရှိခြင်းအဖြစ်ဆိုင်းရာကူစ်းရည်ညွှန်း။ ဆိုင်းရာကူစ်းမှာအအေးဆောင်းရာသီကျောင်းသားများကိုနှင်းလျှောစီး, စနိုးဘုတ်စီးခြင်းနှင့်စွတ်ဖားစီးခြင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေးလေ့ရှိသည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှဘာသာစကားများခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
ဘာသာစကားများ၏ခန်းမဒီအထင်ကရအဆောက်အအုံသမိုင်းဝင်နေရာများအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မည်အပေါ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် 1871. အတွက်ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအပေါ်ဆောက်လုပ်ထားပထမဦးဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
Horatio နယ်လ်ဆင်ဖြူကဒီဇိုင်း, ဘာသာစကားများ၏ခန်းမ Onondaga ထုံးကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်မူလကတစ်ခုလုံးကိုတက္ကသိုလ်သျောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအဆောက်အဦး 1979 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါတယ်။
အတော်များများကဆိုင်းရာကူစ်းကျောင်းသားများကိုကြောင့်သရော်စာစိတ်ကူးယဉ်မိသားစုရဲ့အိမျမှ၎င်း၏အကြံအစည်၏ "Addams မိသားစု" အဆောက်အဦးအဖြစ်ဘာသာစကားများ၏ခန်းမကိုကိုးကားပါ။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Fine Arts ၏ Crouse ကောလိပ်
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Fine Arts ၏ Crouse ကောလိပ် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Eliza Kinnealy
မကြာခဏကျောင်းသားများ, Fine Arts ၏ Crouse ကောလိပ်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး Crouse ကောလိပ်က "Hogwarts" အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပထမဦးဆုံးအဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Archimedes စယ်နေဖြင့် 1888 ခုနှစ်ဆောက်လုပ်ထား Crouse ကောလိပ်နာမည်ကြီးဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးသမား, ယောဟန် Crouse ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ brownstone, အလယ်ခေတ်စတိုင်အဆောက်အဦကျောင်းသားတစ်ဦးအုပ်စုသည်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောတီးလုံးမှတလျှောက်ဆွဲလဲမြည်တဲ့ခေါင်းလောင်းမျှော်စင်ပါဝင်သည်။ ဒါဟာရုပ်မြင်နဲ့ဖျော်ဖြေဝိဇ္ဇာ၏ကောလိပ်မှနေရာဖြစ်သည်နှင့် 1974 ခုနှစ်တွင်သမိုင်းဝင်နေရာများအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မည်အပေါ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Smith ကခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Smith ကခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
1900 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်, Smith ကခန်းမ Gaggin အားဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းနှင့် Lyman C. Smith ကတစ်ဦးလက်နှိပ်စက်ရှေ့ဆောင်ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်နေရာပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဤသည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်သဲကျောက်အဆောက်အဦး, အရပ်ဘက်လျှပ်စစ်နှင့်စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဒီဂရီကမ်းလှမ်းထားတဲ့အသုံးချသိပ္ပံ၏ LC စမစ်ကောလိပ်များအတွက်မူလနေရာဖြစ်သည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Bowne ခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Bowne ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
ဓာတုဗေဒ Bowne ခန်းမပါမောက္ခဖရက်ဒရစ်ဒဗလျူဗျာဒိတ်ကျမ်းနေဖြင့် 1909 ခုနှစ်ကတည်ဆောက်နှင့်ရှမွေလဒဗလျူ Bowne, အဆောက်အဦးရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးမှတစ်ဦးပံ့ပိုးပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်အဆောက်အဦကိုမူလကဓာတုဗေဒဌာနများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ Bowne ခန်းမ 1989 ခုနှစ်နှင့် 2010 ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဆိုင်းရာကူစ်း Biomaterials Institute ၏အိမ်တွင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှဂျီစာကြည့်တိုက် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: လီလီ Ramirez
ယင်းကို Quad ၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပြီး, ဂျီစာကြည့်တိုက်ပါမောက္ခဖရက်ဒရစ်ဒဗလျူဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့် Earl Hallenbeck အားဖြင့် 1907 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ 1972 ခုနှစ်တွင် Bird ကိုစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲနှင့်အတူဂျီအိမ်သူအိမ်သားအသက်တာ၌ collection များကိုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ, အင်ဂျင်နီယာ, ကျန်းမာရေး, စာကြည့်တိုက်လေ့လာမှုများ, ဓာတ်ပုံပညာ, သင်္ချာ, ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်လက်မှုပညာနှင့်ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမှပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။
ဂျီကျောင်းသားများနှင့်ဝန်ထမ်းများအဘို့အပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့နှင့်အတူလေ့လာမှုအာကာသ, ကြိုးမဲ့လက်လှမ်းနှင့် Desktop ကွန်ပျူတာများပေးထားပါတယ်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်တွင်သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏ Lyman ခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Lyman ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
1905 ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်, သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏ Lyman ခန်းမမူလကဇီဝဗေဒ, ရုက္ခဗေဒ, ဘူမိဗေဒ, သတ္တဗေဒ, စိတ်ပညာနှင့်ပထဝီ၏ဦးစီးဌာနများမှအိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Renaissance-စတိုင်အဆောက်အဦဂေါပကယောဟနျသ Lyman ရဲ့ကွယ်လွန်သူသမီးတို့, မာရိနဲ့ Jessie ပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါစကျင်ကျောက်နှင့်အိန္ဒိယထုံးကျောက်အဆောက်အဦးထိပ်ကြမ်းပြင်, အိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်အဖိုးတန်ပြတိုက် collection များကိုဖျက်ဆီး, 1937 မှာမီးဖမ်းမိ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Lyman ခန်းမအဲဒီနှစ်အကြာတွင်ပကတိဖြစ်လေ၏။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Hendrick Chapel
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Hendrick Chapel (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
Hendrick Chapel ယင်းကို Quad မှ perpendicular အဆိုပါဆိုင်းရာကူစ်းကျောင်းဝင်း၏အလယ်တွင်ရှိတည်ရှိသည်။ 1930 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက် Hendrick သည်၎င်း၏တည်ဆောက်မှုအချိန်တွင်တိုင်းပြည်အတွင်းတတိယအကြီးဆုံးတက္ကသိုလ် Chapel ခဲ့ 1,450 လူတွေကိုထိုင်။ အဆိုပါ Chapel ရဲ့ဗိသုကာ 1909. Francis က Hendrick တစ်ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမတ်နှင့် SU ဂေါပက၏အတန်းအစားထဲကနေဂျိမ်းစ်စဲလ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် Dwight ဂျိမ်း Baum ခဲ့ကြသည်, သူ့နှောင်းပိုင်းတွင်ဇနီးဂုဏ်ပြုခြင်းဟာ Chapel လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဂျော်ဂျီယာထုံးကျောက်များနှင့်အုတ် Chapel အားလုံးဘာသာတရားဆောင်ရွက်ပါသည်။ အဆိုပါ Aeolian ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို Francis က Hendrick '' တူမ, Kathryn ၏လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့် 1952 ခုနှစ်မှာအစားထိုးခဲ့သည်နေစဉ် Chapel ရဲ့တရားဟောစဉ်မြင့်ရှိရာကို 1918 ၏အတန်းအစားထဲကလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
Hendrick Chapel နှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးဖြစ်ရပ်များ, စပီကာနှင့်ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများအမျိုးမျိုးအိမ်ရှင်အဖြစ်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Maxwell ခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Maxwell ခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပြည်သူ့ရေးရာ Maxwell ခန်းမဂျိမ်း Dwight Baum နှင့်ယောဟန်စယ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအားဖြင့် 1937 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဂျော့ခ်ျကေတီဟုမ်း Maxwell, ဂေါပကဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခု SU alumnus နှင့်အဖွဲ့ဝင်တဦး, ဂျြောဂြီယနျကိုလိုနီအုတ်အဆောက်အဦရန်ပုံငွေသူတစ်ဦးအောင်မြင်သောဘော်စတွန်မူပိုင်ရှေ့နေ, ဘဏ္ဍာရေး, တီထွင်သူနှင့်ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။
1993 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Eggers ခန်းမ, အများပြည်သူမိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်အတူ Maxwell ခန်းမမှချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှငှက်စာကြည့်တိုက် (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
ဂေါပက Ernest အက်စ်ငှက်ပြီးနောက်အမည်ရှိငှက်စာကြည့်တိုက်, ဘုရငျနှငျ့ရှငျဘုရငျ Associates မှနေဖြင့် 1972 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Bird ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းမပြုမီ, ဂျီစာကြည့်တိုက်ကျောင်းသားများအတွက်အဓိကလေ့လာမှုအာကာသဖြစ်ခဲ့သည်။ ခုနစျပါးကြမ်းပြင်အများအပြားကွန်ပျူတာဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်ကော်ဖီဆိုင်နှင့်အတူ, Bird ကိုစာကြည့်တိုက်ယခုအခါကျောင်းသားတစ်ဦးလေ့လာဖို့အချို့တိတ်ဆိတ်အချိန်လိုလားပါလျှင်မသွားရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများကိုလည်းဤနေရာတွင်လက်ပ်တော့များနှင့်အခြားကိရိယာများငှားရမ်းသို့မဟုတ်ထွက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးစာမျက်နှာများCafé Expresso ၏လွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားသည်။ အဆိုပါကော်ဖီဆိုင်လည်းအသားညှပ်ပေါင်, အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ကိစ္စ္စ, မနက်စာပစ္စည်းများနှင့် pastries အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Link ကိုခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Link ကိုခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
အက်ဒွပ်အဲလ်ဘတ် Link ကို, Link ကိုလေကြောင်း၏တည်ထောင်သူနှင့် Link ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်သင်တန်းပေး၏တီထွင်သူစစ်တပ်နှင့်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်မှူးကိုလေ့ကျင့်ဖို့အသုံးပြုပြီးနောက် 1970 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, ထို Link ကိုခန်းမအင်ဂျင်နီယာအဆောက်အအုံအမည်ရှိခဲ့သည်။ လာမယ့် Slocum ခန်းမဖို့ကို Quad မှာတည်ရှိပါတယ်, Link ကိုခန်းမခြောက်လအဆင့်ဆင့်ရှိပြီးအဆိုပါအင်ဂျင်နီယာကောလိပ်ဖို့မူလနေရာဖြစ်သည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး Newhouse ကျောင်း
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Newhouse အဆောက်အဦး (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
အဆိုပါ Newhouse အဆောက်အဦးများရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ဖို့မြှုပ်နှံနေကြတယ်။ ယင်း၏နှစ်ခုစတူဒီယို, 100 ထိုင်ခုံပြဇာတ်ရုံနှင့်အသံလွှင့်သတင်းဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အတူ Newhouse ကျောင်းသားများကိုထုတ်လွှင့်, ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များကို simulating အားဖြင့်စစ်မှန်သောဘဝအတှေ့အကွုံရဖို့ကူညီပေးသည်။
ပြည်သူ့ဆက်သွယ်ရေး၏ SI Newhouse ကျောင်းတိုင်းပြည်အတွင်းထိပ်တန်းသတင်းစာပညာကျောင်းများတွင်တစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်ခံတစ်ဦးမြင့်မားရွေးချယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Ernie Davis ကခန်းမ
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်မှ Ernie Davis ကခန်းမ (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
Ernie Davis ကခန်းမဆိုင်းရာကူစ်းရဲ့ပထမဦးဆုံး "အစိမ်းရောင်" နေအိမ်သို့ခန်းမဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂါရပ်များအစားအသောက်စွန့်ပစ်နှင့်ရေပူရေစားသုံးမှုလျှော့ချရန်အနိမ့်ရေအသုံးပြုမှုလ်တာ, မုန်တိုင်း-ရေစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, အအေးလျော့နည်းစွမ်းအင်လိုအပ်အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများနှင့်ထမင်းစားခန်းခန်းမထိရောက်စွာပါဝင်သည်။
250 ကျောင်းသားများနှင့်တစ်ဆယ်နေထိုင်သူအကြံပေးတစ်ဝှမ်း Ernie Davis ကအိမ်ခြေ။ အဆိုပါနေအိမ်သို့ခန်းမကိုလည်းထမင်းစားခန်းခန်းမနှင့်အတူကျောင်းသားများ, တစ်ဦးအားကစားရုံအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနားနေခန်းနှင့်ရေချိုးခန်းအဆောက်အပေးပါသည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦး 1962 ခုနှစ်ကောလိပ်ဘောလုံးကြယ်ပွင့်နှင့် Heisman ဒိုင်းဆုချီးမြှင့်ခံရဖို့ပထမဦးဆုံးအာဖရိကန်အမေရိကန်ကစားသမားပြီးနောက်အမည်ရှိခဲ့သည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ Carrier ခုံး
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ Carrier ခုံး (ချဲ့ရန် image ကိုနှိပ်ပါ) ။ ဓာတ်ပုံ Credit: ဂျနီဖာ Cooper က
1980 ခုနှစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့လည်းအဖြစ်လူသိများသည့် 49.262 ထိုင်ခုံ Carrier ခုံး, "ကျယ်လောင်အိမ်," SU ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, ဟော်, လမ်းကြောင်းများနှင့်လယ်ပြင်, ဘောလုံး, လယ်ပြင်ဟော်ကီအပါအဝင်ဖြစ်ရပ်များအမျိုးမျိုးအိမ်ရှင်အဖြစ်; ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အထက်တန်းကျောင်းအားကစားဖြစ်ရပ်များ; တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်, ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်ရပ်ရွာဖြစ်ရပ်များ။ ယင်း၏တပ်ဆင်၏ထိုအချိန်တွင် Carrier ခုံးအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်နှင့်ပထမဦးဆုံးအတွက် 5th အကြီးဆုံးအမိုးခုံးအားကစားကွင်းအဖြစ်အဆင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဆိုင်းရာကူစ်းတက္ကသိုလ် Featuring ဆောင်းပါးများ:
GPA, SAT နှင့် ACT ဇယားဆိုင်းရာကူစ်းအဆင့်လက်ခံရေးများအတွက်
အဆိုပါ Big အရှေ့ညီလာခံ
phi Beta ကို Kappa အဖွဲ့ဝင်များ
SUNY Geneseo ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
San Diego မှဓာတ်ပုံခရီးစဉ်တက္ကသိုလ်
အမိန့်နံပါတ် 1 နီးပါးရုရှားတပ်မတော်ဖကျြဆီး: ဒါဟာအဘယျသို့ခဲ့သလား
Predicciones temporada huracanes 2017 en အမေရိကန်, Carib y က Golfo က de Mexico
ဂျာမန်ဗျည်းအက္ခရာ၏5ပိုင်ထိုက်သော
အဆိုပါ Altimeter ၏သမိုင်း
Top-ကြိုး Anchor Up ကို Set5အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသိကောင်းစရာများ
သင်က X-Ray သတ္တုပါလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
Nielsen မိသားစုများ - သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ တစ်ဦးရီးရဲလ် Nielsen မိသားစုနှင့်အတူတစ်ဦးနှင့်အင်တာဗျူး
တစ်ဦး Hook Diagnosing နှင့်ပီပြင်